WARBIXIN: Kante, Iniesta iyo Magacyo kale oo ka mid ah xiddigaha aan abid yeelan mucaarad! – Gool FM
WARBIXIN: Kante, Iniesta iyo Magacyo kale oo ka mid ah xiddigaha aan abid yeelan mucaarad!
(Yurub) 07 Luulyo 2019. Kubada cagta caalamka ayaa marti galisay xiddigo badan oo cajiib kuwaas oo inaga yeelay in aan baranno magacyadooda, hab dhaqankooda shaashadda horteeda iyo sida ay ula fal galaan caqabadaha soo wajaha marka ay kooxahooda ama qaramadooda matalayaan.
Waxaa jira xiddigo badan oo bixiyay dadaal kubadeed oo ay ku muteysteen helida tageerayaal badan, balse taasi kama aysan reebin in ay yeeshaan mucaarad, maadaama uu xiddig waliba leeyahay taageere iyo mucaarad.
Haddaba waxan halkan idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah xiddigaha aan laheyn mucaaradka ama taageerayaal neceb, marka miisaan la saaro daacadnimadooda hanankooda ciyaaraha iyo sida aysan ugu lug yeelan dhacdooyinka qilafaad kubadda cagta ah.
Waxaa warbixintaan inoo diyaariyay, halkaanna idin kaga soo jeedinaya Wariyeheennada Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho ee ka daawo Muuqaalka hoose.
SAWIRRO: Kooxda Man United oo u duushay dalka Australia & Xiddigaha safarka ka qeyb galay